Mpanamboatra kitapo plastika China, Quotation vita amin'ny plastika namboarina - Angel Garment Accessories Co., Ltd.
Home >Products >Kitapo plastika
Ny kitapo plastika PPE dia fitambarana organika polymer vita amin'ny etilena. Ny polyethylene dia ekena ho fitaovana fifandraisana sakafo tsara indrindra eran'izao tontolo izao. Tsy misy poizina, tsy misy tsirony, tsy misy fofona, mifanaraka amin'ny fenitra ara-pahasalamana amin'ny fonosana sakafo. Sarimihetsika polyethylene, maivana ary mangarahara, hamandoana-porofo, antioxidant, asidra, fanoherana alkali, fahateren'ny rivotra ankapobeny, famehezana hafanana tena tsara sy fananana hafa.Izany no fitaovana manandanja indrindra amin'ny fanontana fonosana plastika.
kojakoja fitafiana anjely co., LTD. Orinasa miavaka amin'ny famokarana karazana PE, PP, kitapo OPP ary kitapo tànana, ny kitapo karazana harona plastika indostrialy sy ara-barotra ary karazana kitapo lamaody ara-nofo, kitapo kosmetika, kitapo tsy tenona, fonosana kitapo, kitapo fiantsenana tontolo iainana ary karazana varotra fonosana blister rehetra, vokatra be mpampiasa amin'ny fivarotana fivarotana lehibe,
kojakoja fitafiana anjely co., LTD. Orinasa miavaka amin'ny famokarana karazana PE, PP, kitapo OPP ary kitapo tànana, ny kitapo karazana harona plastika indostrialy sy ara-barotra ary karazana kitapo lamaody ara-nofo, kitapo kosmetika, kitapo tsy tenona, fonosana kitapo,